Kuse ngokunye beboshelwa ukuzenza amaphoyisa - Ilanga News
Home Izindaba Kuse ngokunye beboshelwa ukuzenza amaphoyisa
Kuse ngokunye beboshelwa ukuzenza amaphoyisa
uMnu Siphakeme Mathonsi noNkz Sphesihle Mathe okusabalale i-video yabo ezinkundleni zokuxhumana begqoke umfaniswano wamaphoyisa okungukwephula umthetho.
LICISHE lamelwa yinhliziyo iphoyisa elibanjwe wukugula ngesikhathi kugasela ozakwabo emzini walo bezobopha indodakazi yalo okusabalale i-video yayo ezinkundleni zokuxhumana igqoke umfaniswano walo, ifafaza amanga ngokufa kukaNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele.
Ngemuva kokusabalala kwalezi zindaba, ILANGA likhulume noyise walezi zingane naye oyiphoyisa, uWarrant Officer (W/O) Thokozani Mathe. Ubezwakala ngisho ekhuluma ukuthi akayikholwa le nto eyenzekile, kwazise uthi akaphilile, usenonyaka ehleli ekhaya.
Uthi ubone ngozakwabo sebetheleka egcekeni, bemtshela ukuthi bazobopha indodakazi yakhe, uNkz Sphesihle Mathe, nomfana wakwamakhelwane wakhe, uMnu Siphakeme Mathonsi, abakwi-video, lapho indodakazi yakhe ifake umfaniswano wakhe ifafaza amanga.
“Le video ngiqale ukuyibona amaphoyisa esekwami. Nangesikhathi bentshontsha umfaniswano wami kangibabonanga,” esho ngezwi eliphansi.
ILANGA lithole ngemithombo yalo ukuthi laba bathathe umfaniswano kaW/O Mathe esiteshini samaphoyisa eMahlabathini. “Usenesikhathi esingaphezulu konyaka elele phansi, engena, ephuma ezibhedlela. Le nto eyenziwe yilezi zingane iyiphutha, zithathe umfaniswano wakhe ngoba zazi ukuthi ulele phansi ngeke abone.
“Noma ngabe bezidlala, kodwa kufanele ngabe ziyazi ukuthi kakudlalelwa emfaniswaneni wamaphoyisa, futhi-ke nesikhathi esikusona, sibucayi kabi ukuthi ungenza ihlaya ngaso,” kusho umthombo.
U-W/O Mathe uthe kudingeke ukuba akhiphe u-R1 000 ingane ngayinye ezikhokhela ibheyili.
“Abantwana bathi bebedlala, bengaqondile ukuphula umthetho, futhi bebengeke bayifake ezinkundleni zokuxhumana le video njengoba bethi ngomunye wabangani babo oyifakile.
I-video lena bathi bayiqophe ngoMsombuluko ekuseni, omunye wabangani babo wayibona, wayifaka ezinkundleni zokuxhumana. Baboshwe ngawo uMsombuluko,” kusho uWarrant Officer Mathe.
Uthi uMnu Mathonsi ngumfanyana wakwamakhelwane ofana nendodana yakhe futhi ujwayele ukumkhandela imoto yakhe.
“Ngiyaqonda ukuthi bebedlala kodwa ngiyethemba ukuthi bayalibona iphutha abalenzile,” esho.
Kule video eseyisabalele ezinkundleni zokuxhumana kuqala kukhulume yena uMnu Mathonsi, enza isimemezelo sokuthi uwavulile wonke amajoyinti nezindawo zokudayisa utshwala, abantu mabaphuthume bayothenga ngoba uzowavala wonke ngezikhathi zabo-1 emini.
UMnu Mathonsi ube esedlulisela ithuba kuNkz Mathe ukuba naye abeke amazwi ambalwa, okuyilapho egcizelela khona ukuthi ngempela amajoyinti bawavulile abantu mabaphuthume.
Ngaphambi kokuba baqede inkulumo yabo, uMnu Mathe umemezela ukuthi uMnu Cele ushonile. Bobabili babe sebeyafa yinsini. Kule video uMnu Mathonsi ubonakala egqoke ihembe elinesibongo esithi Mathe ngakwesokudla, kanti uNkz Mathe ugqoke ihembe eliluhlaza okwesibhakabhaka nesigqoko samaphoyisa okubonakala kukukhulu kunaye.
Ebuzwa ngabezindaba zikamabonakude ngale-video uMnu Cele, uvele wahleka kancane, wathi kuyabonakala ukuthi izingane lezi bezidlala, wangafuna ukuphawula kakhulu ngayo.
Okhulumela amaphoyisa, uBrigadier Vish Naidoo, ukuqinisekisile ukuthi lesi sigameko senzekile wathi laba babhekene namacala okugqoka umfaniswano wamaphoyisa nokuphula umthetho wokuvalwa kwezwe, uthi bangaphandle ngebheyili ka-R1000 umuntu emunye.
Previous articleUbizwe ngomdayisi oshuthe iGcokama
Next articleuchithe izinkunzi umdlali we-highlands park